A foto na-na-na foto mmetụta dị ewu mmetụta na ọ na-enye ohere ka anyị na-ahụ abụọ oyiyi ozugbo. A nkuzi-egosi na ị otú ike a na FCP X.
Ebe a bụ ọgwụgwụ N'ihi - nnọọ otú ị mara ebe m na-aga na nke a.
Mgbe ọ bụla ị chọrọ abụọ, ma ọ bụ karịa, oyiyi n'ihuenyo n'otu oge, i kwesịrị tojupụtara ha ekwesị. A ka ihe atụ, Dr. Cerf na-ekwu okwu isi video bụ na isi storyline, mgbe video nke spinning ụwa jikọọ n'elu.
IHE: stacking iji na-eme ka a dị iche. Lower mkpachị bụ na ndabere, mgbe elu mkpachị nọ ná mgbada. Na, site ndabara, mkpachị niile bụ 100% zuru-ihuenyo na 100% opaque.
Ma e wezụga ... na nke a, Dr. Cerf si video bụ 4: 3, mgbe ụwa bụ 16: 9. Anya, nke a bụ ụgbọ okporo ígwè kpọkara akpọka.
Họrọ elu clip - na nke a, ọ bụ spinning Ụwa.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ma na-eji ịgbanwe njikwa na soja, ma ọ bụ na ihuenyo njikwa na nkiri. Na nke a atụ, m ga-eji na ihuenyo njikwa.
Na Earth clip họrọ, pịa akụkụ anọ ịgbanwe button na ala n'akụkụ aka ekpe nke nkiri. The icon ozugbo amama acha anụnụ anụnụ.
N'otu oge ahụ, asatọ-acha anụnụ anụnụ ntụpọ apụta gburugburu onu nke họrọ oyiyi.
Jidere a ntụpọ tinyere onu n'ọtụtụ oyiyi asymmetrically.
Ịdọrọ a ntụpọ na a nkuku n'ọtụtụ oyiyi symmetrically si n'etiti ihe oyiyi ahụ. Jide Option isi ala ma hụ na otú nke a na-agbanwe otú ị n'ọtụtụ na oyiyi - ọ akpịrịkpa si na-abụghị akuku.
Jide Mgbanwe isi ala, ikpuru, ma na-ekiri ihe na-eme.
Ọnụ ọgụgụ oyiyi ruo mgbe ọ bụ nnoo size ị chọrọ.
Pịa ebe ọ bụla n'ime ihe oyiyi ahụ, na ịdọrọ ya n'ime ọnọdụ.
Mgbe ọ bụla ị na-arụ ọrụ na-emeputa na video, i kwesịrị ịna-ma Action Nchekwa na Mbụ Nchekwa n'uche. Na-egosipụta ihe ndị a zones, pịa mgba ọkụ na n'elu nri akuku nke onyenlereanya na họrọ Gosi Action / Mbụ Nchekwa Ikpehe.
N'ihi na agbasa ozi n'ikuku, niile dị oké mkpa ederede na logos kwesịrị ka a ẹdude n'ime n'ime rektangulu (Mbụ Nchekwa), mgbe nile dị oké mkpa edinam kwesịrị ka a ẹdude n'ime ná mpụta rektangulu (Action Nchekwa). Nke a bụ n'ihi na ọdịdị nke CRT dabeere TV tent - nke ka bụ ọtụtụ ndị otú America ese TV.
Otú ọ dị, n'ihi na web, anyị adịghị nwere otu oru constraints, ma na anyị niile nwere a ndụ nke na-ekiri video ndịna-emeputa na-ewere ndị a ókè n'ime akaụntụ. Ya mere m nkwanye, mgbe na-eke video maka web, bụ igbochi niile dị oké mkpa ederede, ndịna-emeputa, na logos n'ime ná mpụta rektangulu (Action Nchekwa). Ya anya ọma na nwere ala, ọma-e mmetụta.
N'ihi na nke a ka ihe atụ, m na-aga egosiputa ihe oyiyi ahụ dị n'elu nri akuku nke Action Nchekwa na pịa "mere." Nke a-agbanyụ na ihuenyo njikwa na gbachiri oyiyi n'ime ebe.
Ta-DAH! Anyị mmetụta na-eme. Otú ọ dị, e nwere a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ mgbanwe anyị nwere ike ime. Ebe a na-anọ n'ime ha:
1. Họrọ top clip, ụdị Wụk + 4 na-emeghe soja (ọ bụrụ na ọ na-emechi), wee pịa-acha anụnụ anụnụ Gosi button ikpughe ịgbanwe udi nke wuru na-mmetụta.
Mee ọnụ ọgụgụ nke ndị mbiet, na-ekwu 40%. Iji soja-enye gị ohere ịbụ nnọọ kpọmkwem na egbuke gburugburu otu, ma ọ bụ karịa, ihe oyiyi na-kpọmkwem otu size na ọnọdụ.
2. Họrọ eduga onu nke mmetụta na pịnye Wụk + T - nke a na-emetụta ndabara cross-igbari ka mmalite nke clip.
3. Dochie cross-igbari na a Slide (mmetụta Nchọgharị> mmegharị> Slide). Họrọ slide, mgbe ahụ, na-agbanwe ntụziaka nke slide na soja n'ihi ya, ọ na-efe si nri onu.
4. Ka anyị kwuo na ị chọrọ tufuo nke ohere aka nri nke Ụwa. Ihe kacha ụzọ mee nke a bụ cropping. Họrọ Earth clip, wee pịa akuku na akara ngosi na ala n'akụkụ aka ekpe nke nkiri. The họrọ oyiyi nwere acha anụnụ anụnụ Ogwe tinyere n'ọnụ na nkuku.
Dọrọ otu onu, ma ọ bụ nkuku, ruo mgbe oyiyi cropped ụzọ-amasị gị. Pịa "Emela," nke-agbanyụ na ihuenyo njikwa na gbachiri oyiyi.
Foto dị na-na-na foto a bụ oké mmetụta - na ị na-ejedebeghị na nanị otu image, i nwere ike inwe nwere ọtụtụ foto na ihuenyo dị ka ị pụrụ dabara na eku. Nnwale na a na-achọpụta na ihe arụ ọrụ kasị mma maka gị!
(Site n'ụzọ, ekele Dr. Vint Cerf, Alcatel / Lucent, na Pond5 maka ikike iji ihe oyiyi ndị a.)
> Resource> FCP> Olee otú Mepụta a Foto dị na-na-Foto dị Mmetụta Iji Final Cut Pro X